Crime – Myanmar Photo News
Fire burned down Thar Tha Na Yan Thi Monastery at Myit Kyi Nar
မြစ်ကြီးနားမြို့ ရမ်ပူရပ်ကွက်ရှိ သာသနာ့ရံသီဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား ======================================================= Source ; Facebook
March 8, 2018 myanmarphnews Crime, Local, News, Photo
about one thousand people lost their 100 houses in Yay Za Kyo Fire 894 persons became homeless .
About 154 houses burn down because of Yay Za Kyo Fire. Government Authorities supported 1 lakh per house and rice for one week. ရေစကြိုမီး အိမ်တစ်ရာကျော်ဆုံးရှုံး၊ လူတစ်ထောင်ခန့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ် […]
March 5, 2018 myanmarphnews Crime, Local, News, Photo
Fire caused by negligence, destroyed5houses and 50 shops
ပေါ့ဆမီးကြောင့် နန်းဖာလုံဈေးမီးလောင်၊ နေအိမ် ငါးလုံးနှင့် ဆိုင်ခန်း ၅၀ ကျော် ပျက်စီး […]
February 9, 2018 myanmarphnews Crime, Local, News
ဒေါက်တာအေးမောင်နှင့် ဝေဟင်အောင်တို့အား ရသေ့တောင်မြို့နယ် တရားရုံးတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ရုံးထုတ်ရန် ခေါ်ယူ
It is said the security is very restricted when Dr. Aye Maung and Wai Hinn Aung first time appealed at Count in Ya Thae Taung Township on 7:00 AM morning […]
January 29, 2018 myanmarphnews Crime, Local, News
ဇန်န၀ါရီ ၂၃ ရက်၊ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ။ ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကြီးဘေးက အိမ်တန်းစုမှာ ကမ္ဘာပျက်သလားဟုပင် ထင်ရပါသည်။ မီးသည် ချက်ချင်းဆိုသလို လောင်မြိုက်နေသည်။ ဆယ်ပေသာသာ ဓနိမိုးအိမ်ငယ်လေးများမှာ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း မီးတောက်တွေကြားထဲ ကျဆုံးကုန်ပါသည်။ အမေ၊ အဖေအော်လျက်၊ ငိုလျက်၊ အပြေးတပိုင်းရောက်လာသော မိန်းကလေးငယ်သုံးယောက်သည် လူစု၊ လူဝေးကြားမှာ အမေကိုလိုက်ရှာပါသည်။ အမေသည် အ၀တ်တထည် ကိုယ်တခုနှင့် လမ်းနံဘေးမှာ […]
ပေါင်းလောင်း ခရီးသည် တင်ယာဉ်သည် အရှိန်လွန်၍ လမ်းဘေးတံတားဘောင်တိုက် မိ
ယနေ့ ၁၁-၉-၂၀၁၇ ရက်နေ့ ၇း၀၀ နာရီ အချိန်ခန့်တွင် ရမည်းသင်းနှင့် ညောင်လွန့်ကြား မိုင်တိုင် ၂၈၇/၀ ဖာလုံတွင် နေပြည်တော်မှ မကွေး-ဆင်ဖြူကျွန်း သို့ ယာဉ်မောင်း ကိုတိုးအောင် မောင်းနှင်လာသော ပေါင်းလောင်း ခရီးသည် တင်ယာဉ်သည် အရှိန်လွန်၍ လမ်းဘေး တံတား ဘောင်တိုက်၍ ထိုးကျ တိမ်းစောင်း သွားခြင်း။ ခရီးသည် ၂၀ ဦးခန် […]
September 11, 2017 September 12, 2017 myanmarphnews Crime, Local, News